Mihamahahendry kokoa ny rindranasan'ny mailaka ao amin'ny iOS 8 | Vaovao IPhone
Tsikelikely dia manohy mahita fiasa vaovao ao amin'ny iOS 8 izahay izay tsy nambaran'ny Apple ary hitantsika rehefa mitety ny fiainantsika isan'andro amin'ny iPhone. Hitanay ny farany amin'ny fisoratana anarana amin'ny mailaka tompon-tany. Nampahafantatra anay ny orinasa, nandritra ny lahateny fototra ny alatsinainy lasa teo, ireo fihetsika vaovao hahafahantsika mitantana mailaka haingana kokoa (mariho ho toy ny vakiteny, tsy novakiana, hamafana azy ireo, ovay izy ireo avy amin'ny fampirimana , mandroso sns); fa ny fampiharana teratany an'ny Ny mailaka ao amin'ny iOS 8 dia manafina ny fanatsarana hatsarana sy "marani-tsaina" hafa.
Hanomboka amin'ny fanasongadinana ny vaovao momba ny famolavolana isika. Ankehitriny, rehefa te-hamaly na handefa mailaka avy amin'ilay fampiharana mitovy izahay, hiseho ny varavarankely vaovao izany dia hiala, ao aoriana, ny mailaka novakianay. Ao amin'ny iOS 7, Apple dia mifamadika amin'ny varavarankely iray mankany amin'ny iray hafa. Tena ilaina ve io fanovana io? Raha jerena voalohany dia toa mamaly amin'ny resaka estetika avokoa ny zava-drehetra, saingy manampy antsika hahafantatra izany fa mamaly mailaka na mandefa mailaka (mety tsara raha avelan'i Apple hifindra haingana avy eo amin'ny varavarankely iray mankany amin'ny iray hafa isika miaraka amin'ny fihetsika mikasika. ity dia fambara ho an'ny multitasking mahomby kokoa izay mety hiseho amin'ny kinova beta ho avy).
Ary izao dia mitodika any amin'ny faritra "inteligence" isika. Ny rindrambaiko mailaka tompon-tany ao amin'ny iOS 8 dia afaka mamantatra ny adiresy sy nomeraon-telefaona fa ny fifandraisana rehetra dia nandefa anay. Amin'ity fomba ity dia azontsika atao ny mampiditra azy ao anaty rakitrao haingana, tsy mila mandika sy mametaka mamela ny mailaka mailaka, aseho amin'ny sary.
Ary farany, afaka mahita amin'ny sary izay lohanao amin'ny lahatsoratra ianao lakolosy izay miseho manaraka ny saha "Lohahevitra". Ity fitaovana ity dia ahafahantsika mahazo fampandrenesana manokana rehefa misy mpikambana amin'ny mailaky ny vondrona iray mamaly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Ny Native Native App dia lasa maranitra ao amin'ny iOS 8
Ny fanatsarana iray lehibe dia ny fahaizana mandahatra mailaka hahafahana mandefa azy ireo any aoriana, andro hafa, sns. Toy ny Boomerang, izay tsy misy ho an'ny OS.
Matias Long dia hoy izy:
Ny zavatra momba ny fikandrana vaovao miseho amin'ny app mail dia tsy fanontaniana estetika fotsiny! Natao ho an'ny zavatra nolazainao tokoa izany, raha mamaly mailaka ianao ary hadinonao ny zavatra iray nanontaniany anao tao amin'ilay mailaka na te hahita fampahalalana momba ny mailaka azonao ao amin'ny boaty mailaka hafa ianao, dia azonao atao amin'ny " nitaritarika "ny varavarankely nanoratanao ny mailaka sy tamin'ity fomba ity hahafahanao mahita ny zavatra nangatahinao na ny hadinonao. Raha ny fanandramako dia fanatsarana tsara tokoa izany!
Valiny tamin'i Matias Long